Ukucwaswa kwengqondo, nokuthi ungasiza kanjani ekunqobeni - Imfundo Yezempilo | Julayi 2021
Izindaba Umphakathi Inkampani, The Checkout Inkampani, Izindaba Imininingwane Yezidakamizwa, Imfundo Yezempilo Izilwane Ezifuywayo Inkampani, Imfundo Yezempilo Ukuphuma Imininingwane Yezidakamizwa Izindaba, Wellness Cindezela Umphakathi, Inkampani Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izidakamizwa Vs. Umngani
Main >> Imfundo Yezempilo >> Ukucwaswa kwengqondo — nokuthi ungakunqoba kanjani
Ukucwaswa kwengqondo — nokuthi ungakunqoba kanjani
Ukuchaza ukucwaswa | Kungani kuyinkinga | Izinyathelo zesenzo zokuyiqeda | Izinketho zokwelashwa ziyatholakala | Ukusekela abangane nomndeni
Ukucwaswa kwezengqondo kuyinkinga enkulu eyenza abantu abaningi abadinga ukwelashwa babe namahloni okukuthola. Nakhu ongakwenza ukuze uyinciphise kanye nezinketho ezitholakalayo uma udinga usizo.
Isithiyo esisodwa esibaluleke kakhulu okufanele sisinqotshwe emphakathini ukucwaswa nokucwaswa okuhambisana nakho kubantu abanenkinga yengqondo nokuziphatha. - Isahluko 4, 2001 Umbiko WezeMpilo Wezwe, i-World Health Organisation (WHO)
Emhlabeni jikelele, impilo yengqondo isezingqondweni zabasebenzi bezokwelapha kanye nezakhamizi ezijwayelekile ngokufanayo. Kuyacaca ukuthi izimo zempilo yengqondo zithinta izigidi — futhi kuyakhula ukuqwashisa ukuthi abantu abanezinkinga zempilo yengqondo ababona abantu abahlanyayo nje, abayingozi, noma ababi. Kepha le nqubekela phambili ebheke ekusabalaleni nokwamukela ikusasa ayinazo izingqinamba.
Ukucwaswa kusalokhu kuphakathi kwezithiyo eziphikelela kakhulu kubantu abaphila nesimo sempilo yengqondo. Ucwaningo lwezokwelapha lukhombisa ukuthi ukugula ngengqondo kungokoqobo, futhi akukho lutho okufanele ube namahloni ngalo — kodwa abantu abaningi bayawenqaba lo mbono, nanoma yisiphi isibonakaliso sezinkinga zempilo yengqondo emphakathini noma ezimpilweni zabo. Kunezizathu eziningi zokuthi abantu benqabe ukugula ngengqondo, kusukela kolwazi olungelona iqiniso oluyisisekelo kuya ekubandlululweni okuqondisiwe.
Kwesinye isikhathi abantu abangenalwazi basabalalisa izinganekwane kanye nokuzikhathaza ngezinkinga zempilo yengqondo. Lokhu kwenza inhlamba ezungeze impilo yengqondo ejwayelekile iqhubeke kakhulu. Kungaba yingozi ikakhulukazi kulabo abangenawo ukufinyelela okuvamile kolwazi lwezempilo lwengqondo oluqotho nolucabangayo oluphikisa ukungaqondi okuvamile. Kungadala ngisho nokucwaswa, ukufakwa ngaphakathi kwezimo zengqondo ezimbi kulabo abahlushwa ukuphazamiseka kwengqondo.
Kubalulekile ukwenqaba ngenkuthalo ukucwaswa kwezempilo yengqondo kanye nemibono engemihle ngazo zonke izinhlobo zazo. Ukwazi ukuthi ukucwaswa kuyinkinga enkulu akwanele. Ushintsho lwenzeka kuphela ngezenzo.
Amaqembu omphakathi kanye nemiphakathi kumele ihlangane ndawonye ukuze kuqedwe ukucwaswa kwezempilo yengqondo. Lokho kusho ukuthi uqhubeka ngokuhlanganyela nokwabelana ngemininingwane ehambisana nesikhathi yempilo yengqondo nabangani nomakhelwane. Funda ukulalela kahle labo abaphila nokugula ngengqondo nokukhuluma ngesihloko empilweni yansuku zonke. Lezi zenzo zingakha amanethiwekhi okusekela anciphisa ngempumelelo umgoqo oyisigcwagcwa futhi anike kangcono labo abadinga usizo usizo olufanele.
Ukuchazwa kwehlazo lempilo yengqondo
Iningi labantu aliqondi ngokugcwele ukucwaswa kwezempilo yengqondo. Ngaphambi kokugxumela phambili emizamweni yokulwa nokucwaswa, kungadingeka ukuthi uthathe isinyathelo esisodwa noma ezimbili emuva. Okokuqala, zama ukuqonda ububanzi nobubanzi lapho inkulumo yamanje yenzeka khona. Isibonelo, kufanelekile ukufunda nokusebenzisa ngesilulumagama esifanele. Kungakusiza ube umlingani ongcono kulabo abaphila nokugula ngengqondo.
Ukuze uqonde ukucwaswa kwezempilo yengqondo, kufanele uqonde ukuthi kusho ukuthini ukucwaswa, nokuthi kungabalimaza kanjani abantu. Ukucwaswa komphakathi kuyisenzo esisebenzayo noma esingenzi lutho esisetshenziselwa ukucwasa umuntu ngokuya ngezimpawu zakhe ezibonakalayo. Izinhlamba zomphakathi zingakhomba kuzimpawu zomuntu eziguqukayo nezingaguquki, kufaka phakathi yonke into kusuka ebuhlotsheni kuya esimeni sempilo yengqondo.
Ucwaningo olunzulu mayelana nobudlelwano obubandlululwa lukhona. Kepha into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukucwaswa cishe ngaso sonke isikhathi kuzizwa kwehla ukwehla komphakathi ngenxa yezici zabo. Lokhu kungadala ukukhishwa inyumbazane nokuhlukaniswa ngokuhamba kwesikhathi, noma kubhebhethekise ukucwaswa okusobala ezandleni zabaphathi.
Inhlamba yempilo yengqondo iwela kulesi sigaba. Abantu abaphila nokugula ngengqondo babhekana nokucwaswa okusebenzayo nokungatheni empilweni yansuku zonke. Kuthinta yonke into kusuka ekuhlanganyeleni komphakathi kuya ezinkethweni zezindlu. Lokhu kwelashwa okungalingani kunganciphisa kakhulu izinga lempilo futhi kwenze kube nzima kakhulu ukuthola ukwelashwa okufanele.
Izinhlamba eziphathelene nempilo yengqondo
Inhlamba yezempilo yengqondo ibikhona ngezindlela ezahlukahlukene amakhulu eminyaka. Kuqhutshwa ngabantu ngabodwana, kepha imidiya ethandwayo kanye nezinkambiso zomphakathi nakho kuqinisa ukucwaswa emiphakathini emhlabeni wonke.
Ukucwaswa kwengqondo kunezingxenye ezimbili. Okokuqala, kukhona okungabonakali (noma kunalokho, hhayi-ngokusobala ngokomzimba) imvelo yokugula kwengqondo. Okusho ukuthi, ngokungafani nengalo ephukile, awukwazi ukubona kalula lapho umuntu ecindezelekile. Okwesibili, okunye ukubonakaliswa kwesifo sokugula kwengqondo kusungule izinkambiso zomphakathi. Isibonelo, othile osesigabeni se-manic bipolar angase akhulume kakhulu lapho ephuma nabanye. Uma zihlanganisiwe, lezi zinto zingenza isimo sempilo yengqondo yomuntu ongelashwa noma esingalawulwa kahle sibonakale singalindelekile, noma sisabise. Ngokulandelayo, abanye abantu (ngokungafanele) bakufaka lokhu kungalindelekile njengosongo, okungabenza bakholwe noma basabalalise ukucwaswa.
Yize kuyinto ejwayelekile, ukucwaswa kwempilo yengqondo akufanele kwamukelwe njengengxenye yemvelo yempilo yansuku zonke. Izinhlamba zempilo yengqondo, zombili ezinkulu nezincane, ziyingozi kukho konke ukubonakaliswa kwazo futhi zinganciphisa kakhulu ikhono lomuntu lokuqonda isimo sakhe sempilo yengqondo futhi afune usizo olufanele lapho kudingeka.
Kungani ukucwaswa kuyinkinga enkulu
Ukusho ukuthi ukucwaswa kwezempilo yengqondo kuyinkinga enkulu ukwenziwa lula ngokweqile. Eqinisweni, ukucwaswa kwempilo yengqondo kuyizinkinga ezibanzi nezisabalele ezingathinta cishe noma isiphi isici sempilo yomuntu. Uma uhlela ukubhekana nezinhlamba zempilo yengqondo emphakathini wakho nasemibuthanweni yomphakathi, qiniseka ukuthatha isikhathi ukuqonda ngokugcwele umthelela ojulile wenhlamba ngaphambi kokuzama ukulwa nakho.
Izinhlamba zempilo yengqondo zehlela ezigabeni ezimbili ezibanzi: izindlela ukucwaswa okusakazeka ngayo kanye nemiphumela yokucwaswa kubantu abakubonayo. Zombili lezi zigaba zibalulekile ekubhekaneni ngokuphelele nokulungiswa kwenhlamba.
Izindlela ziyabhebhetheka inhlamba
Izindlela okusatshalaliswa ngazo inhlamba zibonakala kakhulu kunemiphumela yazo kubantu. Lezi yizenzo kanye namagama aphenduka ukucwasa ngaphakathi kubantu abanokugula ngengqondo — futhi angene kuyo yonke into kusuka enkulumweni yansuku zonke kuya ekwenziweni kwenqubomgomo. Yize lolu hlu olulandelayo lungaphelele, lezi izindlela ezimbalwa ezijwayeleke kakhulu okusakazeka kwehlazo lempilo yengqondo:
Amagama, kanye nezincazelo zawo ezimbi, angaba nomthelela wangempela endleleni umuntu ophila nokugula kwengqondo azibona ngayo, nokuthi umphakathi omkhulu umbheka kanjani lowo muntu. Indlela umphakathi okhuluma ngayo ngempilo yengqondo nokugula kwengqondo kungathinta ngqo indlela esebenza ngayo kubantu ababhekene nayo.
Ama-Microaggressions yizinkomba ezincane zomlomo (kokubili ngenhloso nangokungenhloso) eziveza ubutha noma ukubandlulula okungekuhle eqenjini elihlosiwe. Ama-Microaggressions angaba ngengozi, noma abe nezinhloso ezinhle, kepha abe esacasula amalungu eqembu elithintekile.
Ukubiza umuntu ngokuhlanya noma ukumbuza ukuthi ngabe uyiphuzile yini imishanguzo yakhe kuyizibonelo zokunciphiswa okuthe xaxa ngokumelene nomphakathi wezempilo yengqondo.
Ama-Microaggressions abhekiswe kubantu abaphila nesimo sempilo yengqondo abelana ngokufana nolimi ngokwesiko olusetshenziselwa ukwehlisa abantu abakhubazekile ngokomzimba (yize benobuqili obuncane). Amagama nemisho eqondile iyahluka kusuka kusethingi kuya kusethingi, kepha cishe wonke ama-microaggressions ahlose ukungasebenzi noma ahlaze umuntu othintekayo noma iqembu. Amanye ama-microaggressions futhi adlulisa ukwesaba okungahambanga kahle mayelana nokugula kwengqondo ngokujwayelekile.
Ama-Microaggressions angenye yezindlela izinhlamba zomphakathi ezisabalele — njengezinhlamba zempilo yengqondo— ezisakazeka emibuthanweni yomphakathi. Abanye abantu bathi ama-microaggressions adinga ukuzihlola ngokweqile, ukuthi abantu abathintekile bazwela kakhulu. Kepha lowo mbono awukhiqizi enkulumweni egxile ekusekeleni abantu abaphila nokugula ngengqondo.
Ama-Microaggressions yizimo ezithile zolimi eziqhubekisela phambili ukucwaswa kwezempilo yengqondo. Imiyalezo engemihle iyindlela ebanzi yokusabalalisa izinhlamba zempilo yengqondo. Okuqukethwe kokuxhumana (imvamisa kwimidiya ethandwayo) okufeza injongo enkulu yokusabalalisa ukwesaba nolwazi olungelona iqiniso ngempilo yengqondo nabantu abaphila nokugula ngengqondo.
Isibonelo, imibukiso yethelevishini eveza umuntu one-schizophrenia njengoyingozi osakaza imiyalezo engemihle ngabantu abanalesi sifo.
Imiyalezo engemihle ingavela ekungazini okungahlosiwe. Leli fomu livela kaningi ezinganeni nasebekhulile abangaqondi ngokugcwele imikhuba efanele yomphakathi ephathelene nesigama sokugula kwengqondo. Lolu hlobo lokungazi lungahlala ebudaleni uma lungalungiswa ngobuhlakani.
Kodwa-ke, imiyalezo eminingi engemihle ukungazi ngamabomu kwabantu noma amaqembu aqonda imiphumela, kepha asebenzise ulimi oluyingozi noma kunjalo. Imidiya yendabuko kanye nemidiya yezenhlalo zombili zisebenza kulesi sizinda, ziphinda ngokugunyazayo imibono eyiphutha ngempilo yengqondo.
Ucwaningo olulodwa olushicilelwe kwiNatural Institute of Health (NIH) luthole lokho 39 % wamaphephandaba amakhulu ase-U.S. wezempilo yengqondo kwakumayelana nobungozi nodlame.
Isibonelo esisodwa impikiswano ephathelene nokulawulwa kwezibhamu nokulawulwa e-United States. Kuyisihloko esingahambi kahle, kepha imithombo ethile yezindaba namaqembu abameli anciphisa inkulumo ibe yindaba yokwelapha ukugula kwengqondo. Yize ukwenza ngcono izindinganiso zempilo yengqondo kubalulekile, ukusebenzisa abantu abaphila nezinkinga zempilo yengqondo njenge-scapegoat ekudutshulweni kwabantu kusabalalisa izinhlamba ezinobudlova ezibhekiswe kubo bonke abantu abanezimo zempilo yengqondo.
Ukulebula okungafanele kungaba yingxenye yemiyalezo engemihle. Lokhu kuvame ukubonakala lapho kukhulunywa ngokugula ngengqondo nokuba khona kwayo empilweni yomuntu ngamunye. Ngokwesiko, imishwana efana nendoda eyi-schizophrenic noma i-bipolar woman yayijwayelekile. Manje-ke, kukhethwa ulimi lomuntu lokuqala kuzinkulumo ezihlobene nokukhubazeka. Imishwana efana nomuntu onesifo sokudangala iyindlela eyamukelwe (noma edingekayo, njengoba kuboniswe kumhlahlandlela wesitayela esiningi nohulumeni) okufanele isetshenziswe.
Ezenhlalo yomnotho, ukuqashwa, nezindlu
Abantu abaphila nezimo zempilo yengqondo (zombili ezitholakele nezingatholakali) bavame ukuwela kubakaki abaphansi bezenhlalo nomnotho bavame ukuba sengozini yemiphumela yesikhathi eside yokugula kwengqondo. Lokhu kungaholela ekubandlululweni kwe-crossover kulabo abanokubandlulula okubi kwabampofu.
Isimo esiphansi senhlalo yomnotho phakathi kwabantu abanokugula kwengqondo kubangelwa yizinto ezahlukahlukene, kufaka phakathi ukucwaswa kwesakhiwo emisebenzini nasezindlini. I- INational Alliance on Mental Illness ibika ukuthi ukuba khona kokugula ngengqondo (noma umbono wako) kungavimbela umuntu ekutholeni amathuba okulingana emisebenzi.
Ngokubanzi, lokhu kungafani ekuqashweni kwenzeka ngenxa yemibono yabaqashi yokuthi abantu abanezifo zengqondo abakwazi ukulawula ngokuphelele izenzo zabo, kusho umlobi weNAMI uLuna Greenstein. Ngasikhathi sinye, laba baqashi abafanayo babeka icala eliphelele ngezenzo ezingajwayelekile kulowo ozoqashwa esikhundleni sesimo sempilo, okungasho ukukhipha abazongenela ukhetho abahlukile ekucatshangweni.
Ngenxa yale mikhuba yokuqasha ebandlululayo, abasebenzi abanesifo sengqondo bavame ukuthola amaholo aphansi kunabo abasebenza nabo be-neurotypical. Lokhu kungenza kube nzima ukukhuphuka isitebhisi, futhi uthole amaholo alandelanayo aphezulu ezikhundleni ezizayo. Abantu abanezimo ezithile zempilo yengqondo babhekana ngqo nale mikhuba yokuqashwa ebandlulula. Isibonelo, kune-70% kuya ku-90% yezinga lokungasebenzi phakathi kwabantu abane-schizophrenia, ngokusho kwe- Isikhungo Sikazwelonke Sezempilo Yengqondo .
Zimbalwa izimpahla zezezimali ezenza kube nzima ukuthola izindlu ezifanele. Ukubandlululwa okusemthethweni nokungekho emthethweni phakathi kwezikhungo zezindlu nabanikazi bezindlu kwenza inkinga ibe yimbi nakakhulu. Lapho kushiywe kungalungiswa, lokhu kubandlululwa kwesakhiwo kungadala ukungabi namakhaya ngisho nokuboshwa ezindaweni ezinemithetho enzima yokungabi namakhaya.
ukwelapha kanjani ukutheleleka komgudu womchamo ngokwemvelo
Umthetho obumbene, njenge-Fair Housing Act ka-1968, wenzelwe ukuvimbela ukubandlululwa kwabantu abathile ezigabeni ezithile ezivikelekile emikhubeni yokuqasha izindlu nokuthengisa. Abantu abakhubazekile bangezelwa kulezi zivikelo njengengxenye yomthetho waseMelika Wokukhubazeka (ADA) ngonyaka we-1990. Kodwa, lezi zivikelo azikho ukukhohlisa. Ukubandlululwa kwezindlu okungacacile kubantu abanezifo zengqondo kusenzeka namanje.
Imiphumela yokukhishwa inyumbazane
Ukucwaswa kunemithelela emibi kubantu abaphila nokugula ngengqondo. Imiphumela yayo ingahle ibe namandla kusukela ekunciphiseni ukuzihlonipha kuye ekuzimiseleni okungapheli ukufuna ukunakekelwa okufanele kwezempilo yengqondo. Uhlu olulandelayo lubandakanya eminye yemithelela engaba khona yokuchayeka ngokuqhubekayo kunhlamba yezempilo yengqondo.
Ukwehla kokuthola ukwelashwa
Kuvame ukwamukelwa ukuthi izinhlobo eziningi zokukhubazeka nokugula okungamahlalakhona kufanele ukwelashwa. Futhi, abantu abaphila nokugula nokukhubazeka okungenakwelashwa kufanele banikezwe wonke amathuba okuphila impilo ecebisa ngokugcwele ngokwemibandela yabo. Ngeshwa, lokhu kuqonda akuzange kusabalale ngokuphelele ezindabeni zempilo yengqondo.
Abantu abagula ngengqondo mancane amathuba okuthi bathole usizo noma amathuba okwelashwa ngenxa yokucwaswa okukhona. Isibonelo, abantu abanesifo sengqondo babonwa ngokungafanele njengobophezele, noma abalawula, ukukhubazeka kwabo. Ngenxa yalokhu, babonwa njengangawafanele kangako amathuba okwelashwa.
Noma kuncane ukubandlululwa kwezimo ezithile, ukushoda kokutholakala kuyenzeka kulo lonke ibhodi — kubantu abanesifo esingelapheki, abakhubazekile nabagula ngengqondo. Uma usebenza ukulungisa lokhu kusilela emphakathini wangakini zama ukubandakanya futhi uhlukane ngokusemandleni.
Izinsizakalo zezempilo yengqondo kufanele zitholakale kalula kulabo abazidingayo; lolu hlobo lwesimo alwehlukile kunalolo olubangelwa ukugula ngokomzimba. Uma wena noma othandekayo uhlala unesimo sempilo yengqondo, kubalulekile ukulwa nokucwaswa futhi ufune usizo lochwepheshe bezempilo yengqondo. Izingane kanye nabantu abadala abasebasha bavame ukuba nobunzima bokukhuluma imizwa yabo ngokunemba, ngakho-ke ochwepheshe bezokunakekelwa kwempilo kanye nabazali bavame ukuphuthelwa izimpawu zokuqala zezinkinga zempilo yengqondo noma bazibhale njengezikho konke emakhanda abo. Lokhu kungasho ukuthi intsha enenkinga ayikutholi ukunakekelwa okufanele kwezempilo yengqondo kuze kube kamuva kakhulu empilweni.
Lapho befuna usizo, abantu abanezifo zengqondo ezingatholakali noma ezingalashwa bangabhekana nokushoda kwesakhiwo kosizo olungabizi. Imvamisa, kunokushoda kwezinsizakusebenza zokunakekelwa kwezempilo zomphakathi ezinikezwe ngokukhethekile ukugula kwengqondo esifundeni esithile. Imizamo yokuxazulula le nkinga iyaqhubeka ezindaweni eziningi, kepha ukucwaswa kwempilo yengqondo kubambezela ukwanda.
Ukuzihlukanisa nokwenza ubuqili
Inhlamba yezempilo yengqondo ibilokhu futhi iqhubeka njalo ibangela imizwa yokuhlukaniswa okungenakuphela phakathi kwalabo abakubonayo. Akubona nje kuphela abantu abatholakala benezinkinga zempilo yengqondo. Noma ngubani onokuxhumana okuqondile nokugula kwengqondo, njengamalungu omndeni walabo abaphila nesimo sempilo yengqondo, angazithola ehlukaniswa yedwa.
Lo muzwa wokuhlukaniswa unanela ukuhlukaniswa okucwaswa kwawo wonke umuntu onezinselelo zezempilo, noma ngabe kungokwengqondo noma komzimba. Kepha kungaba yinselelo enkulu nakakhulu kubantu abanezimo zempilo yengqondo ngenxa yemvelo yabo engabonakali. Lapho ukugula kungabonakali ngeso lenyama, kulula ukuzizwa uhlukene, noma uwedwa emizabalazweni yakho.
Lo muzwa wokuhlukaniswa ungalimaza amakhono omphakathi futhi kwenze kube nzima ukubhekana nezehlakalo ezinzima ngaphandle kokuxhaswa ngabathandekayo noma umphakathi. Ngokuhamba kwesikhathi esingeziwe, ukuzihlukanisa kuba yingxenye ejwayelekile yokubuka komhlaba komuntu, futhi kungehlisa isithunzi noma umbono wokuzihlonipha. Le miphumela emibi ingathinta kakhulu izinga lempilo yomuntu ngamunye.
Kwezinye izimo, abantu abaphila nokugula ngengqondo bahlukunyezwa. Okusho ukuthi, isimo sabo esingelapheki sisetshenziselwa ukubandlulula abanye. Le ndlela ehlukile yokucwaswa emphakathini isho ukuthi umuntu ophila nokugula ngengqondo ngandlela thile ungaphansi komuntu kunabalingani babo be-neurotypical, futhi usebenza kuphela ukuhlukanisa umuntu ngokuqhubekayo.
Imithombo yezindaba edumile ngokomlando yathi izinhloso ezimbi zomenzi wobubi ngezinga elithile lokuphanjaniswa. Nanamuhla, imithombo yezindaba (kokubili ngenhloso nangokungahlosile) kwesinye isikhathi ixhumanisa ukugula ngengqondo nodlame (yize kunjalo iziphetho eziningi zesayensi lokho kususa ukuxhumana).
Ukuqashelwa nokufuna ukwelashwa
Ukucwaswa kwempilo yengqondo kubanga imizwa yokungafaneleki emphakathini. Inhlamba ikhuthaza abanye abantu ukuthi bafune usizo olufanelekile. Kwabanye abaningi, ukucwaswa kuvimbela ukukhonjwa nokwelashwa kwezimo zempilo yengqondo.
UPatrick Corrigan, uBenjamin Druss, noDeborah Perlick biza lokhu kungani uzama? umphumela. Luhlobo lokuzicwaswa okwenza umuntu akholelwe ukuthi ukugula kwakhe kwengqondo kuwumthwalo ongapheli ongaze ususwe. Abantu bangazama ukufihla ukugula kwabo noma banxephezele ngokweqile ngobukhona bayo. Lokhu kungenza isimo sabo sibe sibi kakhulu baze bafune ukwelashwa okufanele.
Ngo-2011, cishe kuphela 60% yabantu abanesifo sengqondo bathole noma yiluphi uhlobo lwezokwelapha ngesimo sabo. Lokhu kungenxa yobuthakathaka obuhlukahlukene besakhiwo ohlelweni lokunakekelwa kwezempilo yengqondo, kodwa futhi kubangelwa ukuzicwaswa okuvimba abantu ekufuneni ukwelashwa okufanele.
Ukuntuleka kokuxilongwa nokwelashwa kuholela emiphumeleni emibi kakhulu, njengoba nje kungenza olunye uhlobo lokugula okungalapheki. Izinkinga zempilo yengqondo zithatha isikhathi ukwelapha nokuphatha, ikakhulukazi ngenxa yokuthi abantu abaningi abatholakala betholakele bazodinga ukuphatha lesi simo ezimpilweni zabo zabantu abadala. Lapho ukucwaswa okuqhubekayo kwempilo yengqondo kubambezela ukwelashwa okufika ngesikhathi, kunciphisa izinga lempilo.
Izinyathelo ezingahle zenziwe ukuqeda inhlamba
Ukucwaswa kwempilo yengqondo, kanye nemiphumela yako emibi, akudingeki ukuthi kube unomphela. Kunezinyathelo eziningi ongazithatha ukuxhasa imizamo yezinhlangano zokukhuthaza emhlabeni wonke. Yize lezi zindlela zingaqedi ukucwaswa kwezempilo yengqondo ubusuku bonke, zizothuthukisa inkulumo yamanje neyesikhathi esizayo yempilo yengqondo emphakathini wangakini.
Lalela futhi uzifundise
Ngaphambi kokuthi wenze umehluko ekutheni umphakathi wakho uyiqonda kanjani impilo yengqondo, kufanele ulalele futhi uzifundise. Impilo yengqondo izinkinga zomuntu siqu nezengqondo ngokwedlulele zithinta umuntu ngamunye ngokuhlukile. Kubalulekile ukufunda kubantu asebeke bakuzwa.
Funda izikhumbuzo ezichaza impilo yansuku zonke enesimo sempilo yengqondo . Khuluma nabantu abaphila nezinkinga zempilo yengqondo, uma wazi othile ozimisele. Cwaninga izincazelo ezingezona eziqanjiwe zezimo zempilo yengqondo. Sebenzisa imithombo yezindaba yesimanjemanje (kufaka phakathi imidlalo yevidiyo efana ne-Night in the Woods neCeleste) ukukusiza uqonde ubunzima bezempilo yengqondo.
Noma ngabe unolwazi ngempilo yengqondo, kubalulekile ukuqhubeka nokufunda. Inkambu yokunakekelwa kwezempilo kwengqondo iguquka ngokushesha njengoba ucwaningo oluningi luhlola izimbangela zalo kanye nokwelashwa kwalo. Uma ufuna ukusabalalisa ukuqwashisa, udinga ukugcina usesikhathini ngentuthuko yakamuva.
Lapho unethuba, khuluma ngokubaluleka kokunakekelwa kwezempilo yengqondo kanye nezinhlamba ezahlukahlukene eziqhubeka nokuzizungeza. Uma uzwa umuntu ekhuluma kabi ngempilo yengqondo, musa ukuthula.
Kubalulekile ukumelana nolimi olusabalalisa ukungathembi noma ukuphikisana nabantu abanezifo zengqondo. Isibonelo, uma uzwa othile ebiza umuntu ofunda naye noma osebenza naye onenkinga yempilo yengqondo, kubalulekile ukukhuluma. Lolu hlobo lolimi olululazayo (noma njengehlaya) lujwayela ukucwaswa kwempilo yengqondo. Kufanele igwenywe noma ibhekiswe lapho kungenzeka khona.
Ukuba ngummeli wezempilo yengqondo kuyindlela esebenzayo yokuletha ukunakekelwa ezindabeni zezempilo yengqondo nalabo abaphila nokugula ngengqondo. Ungaba ngummeli ezindaweni ezahlukahlukene, kufaka phakathi isikole noma indawo yokusebenza, nakuzo zonke izinkundla, ezinjengemithombo yezokuxhumana, amabhulogi, nemicimbi yomphakathi. Ezinye izinhlangano, njengeNational Alliance on Mental Illness and American Foundation for Suicide Prevention, zinikela ngokuqeqeshwa okusemthethweni ngokwengeziwe kumanxusa azo ..
Inhloso eyinhloko yanoma isiphi isinyathelo sokukhuthaza kufanele kube ukuletha ukuqwashisa nokwesekwa kokwengezwa kwezinhlaka zokusekela ukuze kubhekwane kangcono nokunakekelwa kwezempilo yengqondo. Ngale ndlela, abameli bangasiza ekuqhubekiseleni phambili kancane kancane inhlamba yezempilo yengqondo bese beyifaka endaweni yokuzibandakanya okukhiqizayo.
Sebenzisa ulimi olungabandlululi
Isenzo esisodwa esincane umuntu angasithatha ukulwa nokucwaswa kwezempilo yengqondo ukuguqula amagama owasebenzisayo. Ngokukhethekile, khumbula ukugwema ulimi olucwaswa lapho kungenzeka. Amanye amalebula avamile afaka hlanya, ingqondo, nomlutha. Lolu hlobo lolimi alukhiqizi kahle futhi luhlasele ngokuphelele (kuya ngomongo).
Endaweni yalo, sebenzisa ulimi olungabandlululi. Lawa magama nemishwana amukelwa kabanzi ngaphakathi komphakathi wezempilo yengqondo. Okusho ukuthi, ungazisebenzisa ngaphandle kokufaka engcupheni izincazelo ezingezinhle.
Njalo sebenzisa ulimi lomuntu lokuqala. Le yindlela yokwakha eyenzelwe ukwehlukanisa isimo somuntu noma ukukhubazeka kwakhe ekubeni ngumuntu. Isibonelo, ukusho indoda ene-schizophrenia kufanelekile kunokusho ukuthi indoda i-schizophrenic.
Izinketho ziyatholakala kulabo abadinga usizo
Ukunakekelwa kwezempilo kwengqondo kuthuthuka nsuku zonke, njengoba abantu abaningi bethola ukwelashwa. Kunezindlela zokwelashwa ezintathu eziyinhloko zezimo zezempilo yengqondo: ukwelashwa, imithi, namaqembu okusekela. Zonke izindlela azisebenzi kuwo wonke umuntu, ngakho-ke qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho ukuthola ukwelashwa okungcono kakhulu kuwe.
Ukwelashwa kungenye yezindlela ezifinyeleleka kakhulu nezikhiqizayo zokuphatha izimo zempilo yengqondo. Kunezinhlobo eziningi zokwelashwa, okwenza kube inketho esebenzayo enanini elikhulu labantu abaphila nezinkinga zempilo yengqondo.
Ukwelashwa kokuziphatha kwengqondo (i-CBT) kuphakathi kwezinketho ezithandwa kakhulu ngoba kungenza ushintsho lwengqondo nolwenzekayo empilweni yomuntu ngamunye ngokuhamba kwesikhathi. Imvamisa, i-CBT isetshenziselwa ukuphatha ukucindezeleka, ukukhathazeka, kanye nokuphazamiseka kwengqondo okuguquguqukayo — yize kungakhiqiza izinkinga eziningi zokuqonda.
Ukwelashwa kokusebenzisana nakho kujwayelekile futhi kubhekwa kahle ngoba kusiza ukubonakaliswa kwemizwa okunempilo. Kungakhathalekile ukuthi hlobo luni olukhethiwe, ukwelashwa cishe njalo kubandakanya ukuthintana komuntu nomuntu nochwepheshe oqeqeshiwe futhi oqinisekisiwe. Lochwepheshe angahle aklame ukuzivocavoca kanye nemisebenzi yokuzijayeza ekhaya ukuphatha impilo yengqondo.
Njengokwelashwa, amaqembu okusekela asebenzisa izingxoxo ubuso nobuso ukusiza ukubhekana nokugula kwengqondo. Amaqembu okusekela avame ukugxila kuhlobo oluthile lokugula ngengqondo noma kwabantu, njengabomama abaphila nokudangala, noma abantu abadala abaphila ne-bipolar.
Ziwumthombo omuhle walabo abafuna inethiwekhi ebanzi yabangane ukuxhasa imizamo yabo yokuphathwa kwezempilo yengqondo.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zamaqembu okusekela ngezidingo ezahlukahlukene. Isibonelo, abezempi ngemuva kokuthunyelwa bajoyina amaqembu okusekela ngolwazi lwabo oluthile (ikakhulukazi lawo ahlobene ne-PTSD). Omama abasha bangahlangana emaqenjini okwesekwa ukuze babhekane nezinkinga ezahlukahlukene zempilo yengqondo ngemuva kokubeletha bebonke. Ngisho namaqembu okusekelwa aziwa njenge-Alcoholics Anonymous angadlala indima ekusekeleni ukuphathwa kwezempilo yengqondo.
kufanele ngithathe i-vitamin d engakanani uma nginenkinga
Imithi ingenye yezindlela ezithandwa kakhulu zokuphatha impilo yengqondo. Imithi ilula futhi iyasebenza ekwelapheni izimo ezibangelwa ukungalingani kwamakhemikhali ebuchosheni. Kodwa-ke, akuyona yonke imishanguzo yezengqondo esebenza kuzo zonke iziguli. Eminye imibhalo yokwelashwa inyusa amathuba okusetshenziswa kabi kwezidakamizwa noma ibe nemiphumela engemihle ethinta kabi imizwa nenhlalakahle yansuku zonke.
Imithi yezempilo yengqondo iwela ezigabeni eziningi ezibanzi: ama-antipsychotic, ama-anti-depressants, kanye ne-stabilizers. Uhlobo ngalunye lomuthi lelapha uhlobo oluthile lwesimo, futhi lunemiphumela engemihle engaba khona. Le mithi iyasebenza, kepha ayizelaphi izimo zempilo yengqondo-ziqeda nje izimpawu. Khuluma nodokotela wakho ngezingozi nezinzuzo ngaphambi kokuqala noma imuphi umuthi omusha.
OKUhlobene : Ukuthola umuthi ofanele ngempilo yakho yengqondo kuqala ngokuthola udokotela ofanele
Ukusekela abangani nomndeni ngezinkinga zempilo yengqondo
Impilo yengqondo iyinkinga enkulu. Ukucwaswa kwezempilo yengqondo kungumgoqo obalulekile ekwelashweni nasemathubeni abantu abaphila nesimo sempilo yengqondo. Ukwephula lesi siga kungaba nzima, kepha kuletha izinzuzo eziningi, kufaka namathuba andisiwe kulabo abaphila nokugula ngengqondo ukuthola ukwelashwa abakudingayo ukuze bajabulele impilo egculisayo nekhiqizayo.
Ukusekela abangani nomndeni ngezinkinga zengqondo kuyisinyathelo sokuqala esibalulekile. Sekuyisikhathi sokushintsha izimo zengqondo zomphakathi e-United States nakuwo wonke umhlaba.
Umhlahlandlela ophelele wokuphathwa kwemithi yabantu abadala
I-Prednisolone vs. prednisone: Umehluko, ukufana, nokuthi yikuphi okungcono kuwe
ukukhipha kanjani ukutheleleka ezindlebeni ekhaya
i-focalin xr ihlala isikhathi esingakanani
lenzani iphilisi b emzimbeni wakho
ikhambi elingcono kakhulu lasekhaya lezifo zomgudu womchamo
umuthi womphimbo obuhlungu nekhala eligcwele